ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဆွေးနွေး - Yangon Nation News
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် ဆွေးနွေး
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်းရေး ကော်မတီသည် မေလ ၁၄ ရက် နံနက် ၁၀နာရီက ရန်ကုန်မြို့ ရွှေလီလမ်းရှိ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန (NRPC) တွင် ပအိုဝ်း အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) နှင့် Online Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ ကိုဗစ်-၁၉ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး (ငြိမ်း) ခင်ဇော်ဦးနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခွန်မြင့်ထွန်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ဆွေးနွေးကြပါတယ်။
အစည်းအဝေးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းက အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြား ပြီး NCA-S EAO (၁၀) ဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့သည့် သဘောတူညီချက် (၇) ချက်ကို အခြေခံ၍ PNLO နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
“ဆွေးနွေးတဲ့ အချက်ကတော့ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ်ရေးကို ကျွန်တော်တို့ ဒေသအလိုက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကက နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေကို အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ အချို့သော အချက်တွေက Quarantine စင်တာလို ထားရှိရေး ကိစ္စတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ ဒေသထဲမှာရှိတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ သံသယရှိသူ တွေကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရာမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့ပါ” ဟု ပအိုဝ်းအမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ် (PNLO) ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ခွန်မြင့်ထွန်းက ပြောကြားပါတယ်။
အစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် အကြံပေး အဖွဲ့ဝင် ဦးလှမောင်ရွှေက “PNLO ဒေသရဲ့ အနေအထားအရ ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် တားဆီးရေး အတွက် စစ်ဆေးတဲ့ စခန်း သီးခြားထားတာ မရှိဘူး။ ဇုန် (၃) ဇုန် ခွဲပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်နေတယ်။ နောက်တစ်ခု ယူနီဖောင်းဝတ် လက်နက်ကိုင်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတာ မရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ သိရပါတယ်။ PNLO အနေနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ်ဦးစီးဌာန နဲ့လည်း သွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး အတူတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း သူတို့ဆီက သိရပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပူးပေါင်း ပြင်ဆင်မှုက အားရစရာ ကောင်းပါတယ်” ဟု ဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကိုဗစ်-၁၉ နဲ့ပတ်သက်ရင် အစိုးရ အနေနဲ့ အခုလို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ ကော်မတီ ဖွဲ့ပေးတာ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေက နေပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်မှာ ပိုပြီး အထောက်အကူတွေ ရလာအောင်၊ နှစ်ဖက် နားလည်မှုတွေ၊ ယုံကြည်မှုတွေ ရလာအောင် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက ကြိုးစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို. PNLO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ခွန်မြင့်ထွန်းက ပြောကြားပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေခံ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေနှင့် ကိုဗစ်-၁၉ အလွန်ကာလ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေရာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်းကလည်း KIO ဗဟိုကော်မတီနဲ. ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.တို. တွေ.ဆုံခဲ့ပါတယ်။